किन बन्नुपर्‍यो बामदेवलाई सांसद ? ‘पुरानो गुन’ तिर्न प्रचण्डको काँध - Recent Nepal News
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन २४, २०७५ समय: १४:५८:१७
काठमाडौं,असोज २४ – काठमाडौ क्षेत्र नम्बर–७ बाट निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धरले नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमका लागि आफूले राजीनामा दिन लागेको बताएसँगै देश फेरि राजनितीक महोल तातिएको छ । रामबिरले आफूले कसैको दबाबमा आएर नभई स्वतःस्फुर्त रुपमा सदस्य गौतमको लागि सिट खाली गर्न लागेको स्पष्ट पारेपनि ओलोचनाहरु भने धेरै आएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मानन्धरले भनेका थिए, ‘ मैले कसैको दबाबमा आएर राजीनामा दिन लागेको होइन, मैले आफैले वहाँलाई मेरो क्षेत्रबाट प्रस्ताव गरेको हुँ ।’ लामो समयको रस्साकस्सीपछि भएको निर्वाचन र त्यसबाट बनेको दुई तिहाईको सरकार पनि अब आपसी खिचातानी र स्वार्थको शिकार बन्ने संकेत पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ। सोमबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले समेत गौतमलाई काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर ७ बाट उपनिर्वाचनबाट संसदमा भित्र्याउनेबारे छलफल भएको थियो । यसअघि गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गौतम बर्दिया–१ बाट काँग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए ।
प्रचण्डको काँध, विष्णु पौडेलको भरथेग
वामदेवले कसैलाई गुन लगाएका छन् भने ने क पाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेललाई । “युद्धकालमा कार्यकर्ता पठाएर होस् या शान्तिप्रक्रियामा अवतरण गराएर, वामदेवले प्रचण्डलाई ठूलो गुन लगाएका छन्,” ने क पाका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “विष्णु पौडेललाई संगठन विभाग प्रमुखदेखि महासचिव बनाउनसम्म गौतमकै भूमिका छ । त्यसकै गुन तिर्न विष्णु पौडेल ज्यान फालेर लाग्नुभएको छ ।”
प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना
उपप्रधानमन्त्री भैसकेका नेता गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना हुनु स्वभाविक नै हो । हुन त अहिलेलाई ५ वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भनेर एकथरि नेकपाका नेताहरुले भन्दै आएका छन् । तर पार्टी एकता गर्ने बेला आलोपालो गर्ने भद्र सहमति भएको छ भनेर प्रचण्डले बेलाबेला सम्झाउने गर्नुहुन्छ । ओली र उहाँ पक्षका नेताहरु आलोपालो गर्ने कुरा सुन्न पनि चाहँदैनन् ।
संसदमा किन चाहियो बामदेव ?
पृष्ठभूमिका यी घटनाक्रमको नतिजा अहिले आएर बामदेवलाई संसदमा ल्याउने तयारी र राम्बीरको राजीनामा सम्म आएको छ। यो अचानक भएको वा कोहि अमुर्त व्यक्तिले गरेको निर्णय हुदै होइन। यो प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्डकै निर्णय हो भन्न सकिन्छ । तर बामदेव किन आउनु पर्यो भन्ने प्रश्न भने जटिल नै छ। अहिलेको सरकार विस्तारै असफलता तिर जान लागेपछि सरकारको विकल्प खोज्ने कडी बामदेव हुन् या यसै सरकारलाई रेस्क्यु गर्न बामदेव चाहिएका हुन्, यो त समयले बताउला तर ओली, प्रचण्ड र नेपालले बामदेवलाई सांसद बनाएर आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोज्ने भने निश्चित रुपमा देखिन्छ।
बामदेवले के गर्लान भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठिरहेको छ। बामदेव नेपाली राजनीतिमा एउटा प्रवृति र बलियो नाम हो। उनको उपस्थितिले पार्टी र सरकारलाई उर्जा नै प्रदान गर्ने गर्दछ तर समस्यै समस्यामा अल्झी सकेको सरकार र बेमेलको तालमेल गरेर आधा एकीकरण भएको नेकपाले बामदेवलाई सांसद बनाएर पार पाउन सक्ला ? या बामदेव अझै पनि ओली, प्रचण्ड या नेपालकै पुच्छर बन्लान् या आफै प्रधानमन्त्री बन्लान ! यो घटनाक्रम निश्चित राजनीतिक मिशनका लागि भएकोले यसका पाटाहरु विस्तारै खुल्दै जालान तर साचो कुरा के हो भने विकास र समृद्धिको सपना देखेका आम नेपाली जनताले दुइतिहाई मत दिदा पनि देशको राजनीति फेरी अस्थिर हुने खतराको संकेत पाउदा निराश भने अवश्य भएका छन्।
वामदेवका लागि काठमाडौं-७ मा उपनिर्वाचन : राज्यकोषको करोडौं खर्च हुने
नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई संसद्मा ल्याउन उपनिर्वाचन गरिए राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ५ सय ६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गौतमका लागि पछिल्लो पटक चर्चामा ल्याइएको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ मा ५७ हजार ५ सय ५८ जना मतदाता छन्। त्यो रेकर्ड अघिल्लो निर्वाचनको हो। त्यही मतदातालाई अघिल्लै निर्वाचनको खर्चसँग तुलना गर्ने हो भने उपनिर्वाचन गराउँदा २ करोड ९१ लाख २४ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
त्यो खर्च भनेको निर्वाचन आयोगमार्फत हुने खर्च मात्रै हो। गृह र रक्षा मन्त्रालयमार्फत हुने सुरक्षा खर्च त्यसमा पर्दैन। सुरक्षामा पनि ठूलो धनराशिको खर्च हुनेछ।